कस्तो शासन टिक्छ नेपालमा ? यी हुन सफलताका मुलमन्त्र ! « Nepal Bahas
यस्तो भष्मासुर चरित्र भएको जातिबाट सिर्जनाको कल्पना गर्नुपनि बेकार छ । आफ्नो हित चाहने स्वार्थी समुहले हावादारी योजना बनाएर बहकाउन सक्यो भने त्यत्तिबेला खुव उपयोगी हुन सक्दछ यो जाति ।
प्रकाशित मिति : ५ बैशाख २०७६, बिहीबार ०९:२९
२०६३ साल यताको कालखण्डमा विदेशीहरु नेपालमा आफ्ना स्वार्थहरु कार्यान्वयन गर्न आदेशात्मक अनुरोध गदर्थे । नेपालका प्रभावशालीहरुलाई नियमित भेटघाट गरिरहन्थे । तर अचेल त उनीहरुलाई त्यत्ति कष्ट पनि उठाउन पर्दैन । उनीहरु सिधै टेलिफोनमा यसो गर्नु उसो गर्नु भनेर आदेश दिन्छन् । उनीहरु सिधै आफू टेलिफोन पनि गर्दैनन् । आफ्ना कनिष्ठ अधिकारीहरुलाई यसो गर्न लगाउँछन् । सितिमिति नेपाली नेताहरुलाई भेट्न पनि चाहँदैनन् । आज नेपालमा उनीहरुको आदेश अकाट्य ब्रह्मवाक्य झैं मानिन्छ ।
हिजो कम्तीमा राजा र प्रधानमन्त्रीहरुबीच हरेक विषयमा दरवारमा लामो छलफल हुन्थ्यो । प्रधानमन्त्रीले राजालाई कन्भिन्स गर्नुपथ्र्यो र राजाले प्रधानमन्त्रीलाई कन्भिन्स गर्नुपथ्र्यो । प्रधानमन्त्रीलाई चित्त नबुझाएसम्म दरवारले निर्णय लिंदैनथ्यो । नेपालका नेताहरुलाई त्यो सम्मान र पद्धति पचेन । अचेल उनीहरु विदेशीहरुका आदेशहरु हुबहु कार्यान्वयन गर्न बाध्य छन । तर उनीहरुलाई यसैमा आनन्द छ । न त कुनै पश्चाताप नै छ । दुरीबाट अर्थात धेरैमाथिबाट र दोहोरो सम्वाद नहुने गरी आउने आदेश पालना गर्ने नेपालीको रहर हो र आमचरित्र पनि हो ।
नेपालमा होटलमा भाँडा माझ्ने दाई चाहि मासिक रु. १५ हजारको तलव पाए पनि साहुलाई टेर्दैन, बन्द हडतालवाला समूहका पछाडि लागि रहन्छ । उसैको भाई पारीपट्टि भारततिर महिनाको रु. पाँच हजारमा अहोरात्र निष्ठापूर्वक मालिकको सेवा गरिरहेका प्रशस्तै उदाहरणहरु भेटिन्छन् ।
गोर्खाली सेनाले बर्मादेखि फोकल्याण्डसम्म कारगिलदेखि काबुलसम्म ठूला–ठूला सैन्य अपरेशन सफलतापूर्वक सञ्चालन गरी विश्वकै सफल इन्फेन्ट्रीका रुपमा ख्याती कमाएको छ । परन्तु त्यही गोर्खाली सेनाहरुले नेपालमा भने भरुवा बन्दुक बोकेका माओवादीहरु सामु राजनीतिक र रणनीतिक रुपले लज्जाजनक हार स्वीकार गर्नुपर्यो ।
नेपाल सरकारका सचिवहरु र कार्यालय प्रमुखहरुमा सबैभन्दा असफल तिनै सचिव र कार्यालय प्रमुखहरु हुने गर्दछन् जो निर्णय प्रक्रियामा सहभागितामुलुक मोडेल अपनाउँछन्, पारदर्शिपना अपनाउँछन् र सबै तहका कर्मचारीहरुलाई समान पहुँचका साथ नरम व्यवहार गर्दछन् । शाखा अधिकृत स्वकीय सचिव हुनभन्दा नासु स्वकीय सचिव हुँदा कामकारवाही बढी चुस्तदुरुस्त हुने र निष्ठापूवृक कार्यसम्पादन हुने यस पंक्तिकारको पनि अनुभव रहेको छ । सचिव, सहसचिव उपसचिव, शाखा अधिकृतको संरचना भएको कार्यालयको स्थानमा सचिव भन्दामुनि सिधै शाखा अधिकृत मात्र उपलव्ध भएको परीस्थितिमा कार्यसम्पादन अव्बल रहने गरेको हालका प्रदेश सरकारका मुख्यमन्त्री र मन्त्रीहरुको पनि निष्कर्ष रहेको उनीहरु अनौपचारिक वार्ताका क्रममा यस पंक्तिकारसँग भन्ने गर्दछन् ।
नेपाल एकीकरणको दू्रतगतिको सफलताका पछाडि राजा र फिल्ड कमाण्डरबीच रहेको आदेशात्मक एकोहोरो सीधा सम्पर्क नै हो । यदि फिल्ड कमाण्डर र राजाका बीच सेनाको अर्को तह भएको भए र सेना र राजाबीच दोहोरो तर्कसम्वादको अवस्था आएको भए तर्कवितर्कमा नै नेपाल एकीकरण अभियान जेलिएर तुहिसक्थ्यो ।
राणाकाल १०४ वर्षसम्म चल्नुमा श्री ३ को खलक र कार्यान्वयन गर्ने निकायबीच दोहोरो सम्वाद नहुनु र राणाको दरवारमा सर्वसाधारणको पहुँच नहुनु पनि एउटा प्रमुख कारण हो । जब श्री ३ का दरवारहरुमा सर्वसाधारणको पहुँच बढ्दै गयो अनि सर्वसाधारण र राणाहरु आपसमा घुलमेल हुनथाले त्यसले सिद्धान्तः राणा शासनलाई बलियो बनाउनु पर्ने हो तर उल्टो राणाशासन विरोधी माहोल सिर्जना गर्यो । राणा शासनमा जर्नेलको मुनी कर्णेल, मेजरजस्ता पदवीहरु नराखी केवल सुवेदारहरुको नेतृत्वमा फिल्ड कमाण्डरको व्यवस्थासहितको सेनाको संरचना भएको भए राणा शासन अरु १०० वर्ष चल्ने थियो ।
नेपालमा जुन शक्तिले दोहोरो सम्वादको अवसर दिन्छ, आफू बराबर हैसियत राख्ने मानिसलाई आफ्नो वरिपरी राख्छ, त्यो शक्ति आफैं सामाप्त हुन्छ भन्ने ज्ञान सीपी मैनालीको राजनीतिक अवसानबाट पुष्टि हुन्छ । उनले झापा आन्दोलनपछि आफ्ना समकक्षीहरु जोड्न नलागेर आफ्नो एकोहोरो आदेशलाई मान्ने एरिया कमाण्डरहरुमार्फत राजनीति सञ्चालन गरेको भए उनी आजसम्म नेपाली कम्युनिष्ट आन्दोलनको मियो बनी रहन्थे । राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी फस्टाउन नसकेको पनि यसै कारणले हो । जहाँ एकै पुस्ताका एकै स्तरका नेताहरुको बाहुल्यता छ ।
गिरिजाप्रसाद कोइरालाले २०४६ सालपछि आफू स्थापित हुन पार्टीमा रहेको पहिलो पुस्तालाई विस्थापित गर्दै एकोहोरो आदेशमात्र पालना गर्ने युवाहरुको समूह तयार गरे र सफल भए । प्रचण्डले पनि पुराना पुस्तालाई विस्थापित गर्दै दलभित्रका तेश्रो तहमा क्रियाशिल युवाहरुलाई हातमा लिएर पार्टीमा आफूलाई सफल बनाई रहेका छन् । पुराना पुस्ताभित्रै राजनीतिक खेल खेल्न खोजेको भए उनीहरु त्यही पुरानो पुस्ताको व्यवस्थापनमा आफू असफल भईसक्ने थिए । नेपालमा जुन शक्तिले दोहोरो सम्वादको अवसर दिन्छ, आफू बराबर हैसियत राख्ने मानिसलाई आफ्नो वरिपरी राख्छ, त्यो शक्ति आफैं सामाप्त हुन्छ भन्ने ज्ञान सीपी मैनालीको राजनीतिक अवसानबाट पुष्टि हुन्छ । उनले झापा आन्दोलनपछि आफ्ना समकक्षीहरु जोड्न नलागेर आफ्नो एकोहोरो आदेशलाई मान्ने एरिया कमाण्डरहरुमार्फत राजनीति सञ्चालन गरेको भए उनी आजसम्म नेपाली कम्युनिष्ट आन्दोलनको मियो बनी रहन्थे । राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी फस्टाउन नसकेको पनि यसै कारणले हो । जहाँ एकै पुस्ताका एकै स्तरका नेताहरुको बाहुल्यता छ ।
राजा महेन्द्र र वीरेन्द्र एकै व्यवस्थाका दुईवटा राजा हुन् । दुवैले एकैखालको संयन्त्रमाथि बसेर राज्य गरेका थिए । परन्तु राजा महेन्द्रको शासनकाल सफल हुनु र राजा वीरेन्द्रको शासनकाल असफल हुनुमा एउटै तत्वको फरक थियो । राजा महेन्द्र राज्यसंयन्त्र बाहिरको विद्धतवर्गको परामर्शमा नीति योजनाहरु तय गर्दथे र राज्यसंयन्त्र त्यो नीति योजना लागु गर्ने आदेश पालन गर्ने निकाय मात्र हुन्थ्यो । राजा वीरेन्द्रले आफू मातहतका निकायसँग बहस गर्ने र निष्कर्षमा पुग्ने प्रचलनको शुरुवात गरेसँगै राज्यसंयन्त्रले उनलाई टेर्न छोडेको र अनुशासनहिनता आउन थालेको हो ।
धेरै माथिको शक्तिले आदेश दियो भने चुपचाप आदेश स्वीकार्ने त कसैले बराबरको हैसियत दियो भने नटेर्ने नेपाली समाजको आम चरित्र हो । आदेश पालना गर्ने र आदेश दिने बीच धेरै ठूलो दुरी हुुनुपर्दछ । आदेश दिने र आदेश पालन गर्नेबीच दोहोरो सम्वाद हुुनुहुदैन ।
घरपरिवारमा पनि जुन नेपाली घरमा बहस, पारदर्शिता र सहभागितामुलुक व्यवस्था अंगीकार गरिएको हुन्छ, त्यो नेपाली परिवार चाँडै विखण्डन भएका थुप्रै उदाहरणहरु हामी सबैका सामु घाम जस्तै छर्लङ छ ।
नेपाली जाति आफैमा बहादुर जाति पनि होइन । यसमा कठिन परीस्थितिमा टिक्ने क्षमता पनि छैन । दीर्घकालिन फाइदा घाटा के हो भनी सोच्ने क्षमता पनि यो जातिसँग छैन । यदि नेपाली जातिमा यो गुण हुँदो हो त बर्मा, उत्तरपूर्वी भारत र भुटानबाट यो जाति लखेटिने थिएन । यदि यो जाति बहादुर लडाका भएको भए भुटानमा किन टिक्न सकेन । बर्मामा किन टिक्न सकेन । भारतमा किन टिक्न सकेन त ? २०६३ को मधेश आन्दोलनका क्रममा आफ्नै देशमा मधेशबाट धपिएर काठमाडौंमा शरणार्थी भएर किन बस्नु पर्यो र ? यो जातिमा भविष्यको बारेमा सोच्ने क्षमता भएको भए भुटान र बर्मामा पनि त्यो समाजसँग मिलेर बस्नसक्ने थियो किनभने त्यहाँको वातावरण नेपालीहरुका लागि त्यत्ति प्रतिकुल थिएन जति अचेल प्रचारप्रसार गरिंदै छ ।
यो जातिको आफनो कुनै लक्ष्य पनि छैन, माग पनि छैन, अवधारण पनि छैन । इतिहासमा सफल नेतृत्व जन्मेर धेरै माथिबाट आदेश दिएर परिचालन गर्न सकेको खण्डमा इतिहासमा केही राम्रा घटनाहरु घट्न पुग्छन् । अन्यथा आफ्नाले आफ्नालाई समाप्त गर्ने, आफ्नो शुभचिन्तकको विनाशमा क्षणिकलाभका लागि परिचालन हुने यो जातिबाट धेरै अपेक्षा गर्नु मुर्खता नै हुन्छ । नेपाली पोशाक, नेपाली भाषा र हिन्दूधर्मको जरोसमेत मास्न यो जातिले खेलेको भूमिका जगजाहेरै छ । यस्तो भष्मासुर चरित्र भएको जातिबाट सिर्जनाको कल्पना गर्नुपनि बेकार छ । आफ्नो हित चाहने स्वार्थी समुहले हावादारी योजना बनाएर बहकाउन सक्यो भने त्यत्तिबेला खुव उपयोगी हुन सक्दछ यो जाति ।
नयाँ दिल्लीबाट कलकत्ता जाने क्रममा एकजना भारतीय विद्धानसँग यस पंतिकारको लामो बहस भएको थियो । उनले भारतले गोर्खा सेना राख्ने कुराको प्रतिवाद गरे । उनको तर्क थियो, पैसाका लागि लड्नेहरु जहाँबाट बढी पैसा आउँछ उसैका लागि लड्छन् । त्यही नेपाली गोर्खा सेनामा रही कश्मिरमा भारतको सीमा रक्षा गर्दैछ, त्यही सेनाको परिवार भारतको नाकाबन्दीका कारण ग्याँसको अभावमा चिउरा खाएर बाच्न वाध्य भएको परीस्थिति पनि हामीले प्रत्यक्ष देखेको नै हो । तर ऊ आफ्नो परिवारको पीडालाई पीडा स्वीकार गर्न तयार छैन, केवल आकर्षक तलबका लागि स्वाभिमान बेच्न तयार छ । भारतीय ती विद्धानको तर्कमा दम रहेको यस घटनाक्रमले पनि पुष्टि हुन्छ ।
यस्तो चरित्र भएको समाजलाई कुनै तर्क, वाद, आदर्श, हित र नीतिले कज्याउन सकिंदैन । जो यस्तो प्रयास गर्न खोज्छ त्यो बीपी कोइराला, सीपी मैनाली झैं जीवनमा असफलता बाहेक केही प्राप्त गर्न सक्दैन । दोहारो सम्वाद, सहभागिततामुलुक ढाँचा, विकास, आर्थिक उन्नत्ति, जीवनोस्तर सुधारजस्ता कार्यक्रमहरु पनि यहाँ काम लाग्दैनन् । नेपाली समाज आफ्नो हित र अहित सोच्न सक्ने समाज पनि हैन ।
उपरोक्त उदाहरणहरुबाट नेपालमा व्यवहारवाद, मध्यमार्ग, सहभागितायुक्त व्यवस्थापन सदैव असफल हुने गर्दछ । धेरै माथिको शक्तिले आदेश दियो भने चुपचाप आदेश स्वीकार्ने त कसैले बराबरको हैसियत दियो भने नटेर्ने नेपाली समाजको आम चरित्र हो । आदेश पालना गर्ने र आदेश दिने बीच धेरै ठूलो दुरी हुुनुपर्दछ । आदेश दिने र आदेश पालन गर्नेबीच दोहोरो सम्वाद हुुनुहुदैन ।
आदेश पालन गर्नेलाई तर्क गर्ने अवसर पनि प्रदान गरिनु हुँदैन । आदेश पालन गर्नेलाई लक्ष्य तोकी दिनुपर्दछ र सो लक्ष्य पुरा गरेमा पाइने पगरीको व्यवस्था गरिदिनुपर्दछ । निजी क्षेत्र होस कि सरकारी क्षेत्र, राजनीतिक दलहरु हुन् या सामाजिक अभियान, निजामति होस् या जंगी सबैतिर लागु हुने यो सफलताको मूलमन्त्र हो ।
प्रधानमन्त्रीसँग ‘रअ’का नेपाल प्रमुखको भेटघाट, कांग्रेस सभापतिमा कसैलाई पनि समर्थन नरहेको जानकारी
कांग्रेस महाधिवेशनको तयारीसँगै मडारिएका खतरा !
पुष्प खड्का र मिना कार्कीले कस्यो लगन गाठो
मौसमको सूचना किसानसम्म नपुग्दा….
भूकम्पपछि अलपत्र गुम्बाको सामान नयाँ समितिलाई